Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation 4.53.0.0 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.53.0.0 လြန္ခဲ့ေသာ2ရက္က
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အမြဲတမ်း Waze အားအတူလမ်းမပေါ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုငါသိ၏။ သင်လမ်းကိုသိရင်တောင် Waze အား Real-time အတွက်အသွားအလာ, ဆောက်လုပ်ရေး, ရဲတပ်ဖွဲ့, ပျက်ကျနှင့်ပိုပြီးအကြောင်းကိုပြောပြသည်။ ယာဉ်အသွားအလာသင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်မကောင်းတဲ့ဖြစ်လျှင်, Waze အားသင်အချိန်ကိုကယ်တင်ပြောင်းလဲပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်ကြောင့် Waze အား?
◦ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုကြည့်ပါ - သင့် drive ပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာ, ရဲ, ဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပိုပြီးအကြောင်းကိုသတိပေးချက်များ
◦အဲဒီမှာပိုမြန် Get - လက်ငင်းလမ်းကြောင်းအပြောင်းအလဲများအသွားအလာကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်သင်အချိန်ကိုကယ်တင်
Waze အားထံမှဂီတအဘို့သင့်အကြိုက်ဆုံး apps များနားထောင်ရန်, podcasts & ပိုပြီးလက်ျာဘက် - Play စဂီတ & ပိုပြီး◦
သငျသညျရောက်လာပါလိမ့်မယ်လာသောအခါ◦ကိုသိပါ - သင့် ETA တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအသွားအလာအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံသည်
◦ဓာတ်ငွေ့များအတွက်လျော့နည်း Pay - သင့်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်စျေးအသက်သာဆုံးဓာတ်ငွေ့ကိုရှာဖွေ
အန်းဒရွိုက်အော်တိုအတူ◦ Drive ကို - သင့်ကားရဲ့ display ကိုအပေါ် Waze အားကိုသုံးပါ
◦အမြဲတမ်းနည်းလမ်းရှာ - သင်ကားမောင်းနေစဉ်အတွင်းသင်လမ်းပြအသံအမျိုးမျိုးကနေရှေးခယျြ
Waze အားနှင့်အတူမောင်း, ကိုပြင်ဆင်ခံရ!
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation အား အခ်က္ျပပါ
vc007 စတိုး 13.13k 2.66M
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
ေနာက္ထပ္ ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း အက္ပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္
APK အေၾကာင္း Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.53.0.0
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.waze.com/legal/privacy/
App Name: Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation
File Size: 81.92MB
Release date: 2019-07-19 19:51:33
လက်မှတ် SHA1: 35:B4:38:FE:1B:C6:9D:97:5D:C8:70:2D:C1:6A:B6:9E:BF:65:F2:6F
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Alex Agranovich
အဖွဲ့အစည်း (O): Waze
နယ်မြေ (L): Raanana
နိုင်ငံ (C): Israel
Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Live Navigation APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ